Apple inonyora Apple TV muhofisi yepamutemo sekunge yaive console | Ndinobva mac
Kazhinji patinotaura nezve Apple patent isu tinotarisira zvigadzirwa zvitsva kana zvigadzirwa zvinogoneka zvinosvika mune ramangwana, zvinoitikawo nemvumo iyi kana kunyoreswa izvo zvinongoshanda kukumbira mari mukutsinhana mune iyo munhu anoda kuishandisa. Ino nguva izvo zvatiinazvo ndizvo kunyoreswa kwechigadzirwa chatinoziva kare uye icho chainoda ndechekuti chiwedzerwe kune iyo runyorwa rwezvigadzirwa zvakanyoreswa sekoni.
Apple TV parizvino ine mitambo, asi kunyoreswa kwepasi rose kunyorera 028 ndiyo inoshandiswa kunyaradza uye izvi ndizvo chaizvo izvo iyo kambani yeCupertino inoda Apple TV. Uku kumwe kushamisa kwekufunga nezve mhando yechigadzirwa, asi isu hatisi ivo vanozoshora iyi Apple rekodhi.
Zvichida Apple Izvo zvinowanzoitika iyeye anotarisira kuratidza iyi patent uye izvo iyo kambani inotarisira kunyoresa ndiyo yakatarwa yepamusoro bhokisi sekunge yaive console. Shanduko mune ramangwana riri pedyo rechinhu ichi? Zvakanaka, chokwadi ndechekuti musika weconsole parizvino wakazara, sakauye zvinoita sekunge Apple ikozvino inoda "kuisa mhino" mukugadzira kwayo yega koni kana chimwe chakadai.
Pasina mubvunzo, yechina uye yechishanu chizvarwa Apple TV ine maapplication emitambo uye inobvumira vashandisi vanayo kuti vanakidzwe navo, asi hachisi chigadzirwa chakanyatso gadzirirwa mutambo kunyangwe iine iyo SteelSeries isina waya inodzora seyakashongedzwa. Nimbus uye iro simba uye kugona kudzikamisa zvirimo 4k kuti usarambe, izvo zvaizobvumidza kuwedzera mamwe anonakidza mazita emazita. Izvi zvinogona kunge zviri izvo zvinogona kuve neApple neichi rekodhi, kuvhura nhevedzano yemitambo yakanaka yemavhidhiyo kwete senge iwo yazvino izvo zvakanyatso gadziriswazve kunyorera kweiyo yakatarwa yepamusoro bhokisi. Tichaona zvinoitika pakupedzisira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Apple inonyora Apple TV muhofisi yepamutemo sekunge yaive console